सुप्रिम मल्ल र रुक्सनाले ‘द भ्वाईस किड्स’ नजित्नुको कारण के थियो ? सिम्रन आलेको आमाले भित्री कुरा खोलिन (भिडियो हेर्नुस) « Etajakhabar
सुप्रिम मल्ल र रुक्सनाले ‘द भ्वाईस किड्स’ नजित्नुको कारण के थियो ? सिम्रन आलेको आमाले भित्री कुरा खोलिन (भिडियो हेर्नुस)
पछिल्लो समय सम्पन्न द भ्वाईस किड्सको पहिलो सिजन बिवादबाट टाढा रहन सकेन । जेनिस उप्रेती बिजेता बनेसँगै अन्य टप ८ का प्रतिस्पर्धीहरुको अभिभावक र समर्थकहरुले बिरोध जनाएको देखियो । जेनिसका कोच प्रमोद खरेलले केहि अपजशका शव्दहरु सन्जालमा बेहोर्नु पर्यो । बिशेष त सुप्रिम मल्ल ठकुरी र रुक्सना लिम्बु बिजेता नबन्दा बिरोधका कुराहरु आए । त्यस पुर्व अर्की प्रतिस्पर्धी पेमा सेमिफाईनलबाटै बाहिरहँदा पनि सन्जालमा बिरोध भएको थियो । कतिले भोटको खे र नोटको खेल भन्दै द भ्वाईस किड्स पारदर्शी नभएको प्रति गुनासो गरे ।
यसैबिच सेमिफाईलबाट बाहिरिएकी प्रतिस्पर्धी सिम्रन आले र उनको आमा मिडियामा आएर बोलेका छन् । सिम्रनकी आमाले भ्वाईस अफ किड्सको पछिल्ला राउण्डहरु भोटमै निर्भर रहने भएकाले यस शैलीलाई आफुहरुले स्विकार्न सक्नु पर्ने बताईन् । साथै भोटबाटै बिजेता बनाउने प्रचलन नराम्रो भएको बताउँदै उनले आफ्नी छोरी यहाँसम्म पुग्नुलाई भने सकारात्मक रुपमा लिईन् । भोट किन्ने पर्ने रहेछ भन्दै उनले सुप्रिम र रुक्सनाले भ्वाईस नजित्नुको कारण यसरी खुलाईन । भिडियो हेर्नुस